चिनियाँ राष्ट्रपति ‘सी’ ले कोभिड-१९ विरुद्ध युद्धको नेतृत्व गर्ने
एजेन्सी । चीनमा दु्रत गतिमा फैलिदैं गएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) विरुद्ध युद्धको नेतृत्व राष्ट्रपति ‘सी’ ले गर्ने भएका छन । कोभिड-१९ को प्रकोप सार्वजनिक स्वास्थ्यमा आपतकाल निम्त्याउने कारण बनेको छ ।...
कोराेना विरुद्ध संकल्प प्रस्ताव पेश
काठमाडौं । प्रमुख पतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना विरुद्धको राष्ट्रिय संकल्प आवश्यक भन्दै संसद्‍मा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गरेको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस सांसद गगन...
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, म छिट्टै काममा फर्किनेछु
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्पतालबाट छिट्टै काममा फर्किने सन्देश पठाएका छन् । गत बुधवार मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्री ओलीले अस्पतालको शैयाबाट आफू क्रमिक रूपमा ठिक हुँदै गए...
काठमाडौँ । गत डिसेम्बर महिनाको अन्तमा चीनको वुहान प्रान्तबाट फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-१९ को सङ्क्रमणले विश्व यति खेर आक्रान्त बनेको छ । कोरोना भाइरसको कारण हालसम्म ३ हजार ३ सय ८५ जनाले अकालम...
बागलुङ । विश्वभर चुनौतीका रुपमा देखिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिमलाई ध्यानमा राखेर धौलागिरि अञ्चल अस्पताल बागलुङमा आइसोलेसन कक्ष स्थापना भएको छ । सो भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएमा धौलागिरिकै ठूलो...
इजरायल र प्यालेस्टाइनले बेथ्लिहम नगरलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने
एजेन्सी । सात जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि इजरायल र प्यालेस्टाइनले बेथ्लिहम नगरलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय गरेका छन् । आज रातदेखि अब प्यालेस्टाइनी र इजरायली नागरिकले सो सहर छाड्न वा त्य...
घूस लिने स्वास्थ्यका सहसचिवलाई ४ महिना कैद फैसला
काठमाडौं । विशेष अदालत काठमाडौंले घूससहित रंगेहात पक्राउ परेका नेपाल सरकारका सहसचिव डा. तारानाथ पौडेललाई ४ महिना कैद र १ लाख रुपैंयाँ जरिमाना हुने फैसला गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले...
हिमालयन भ्याली म्यानपावरमा विभागकाे छापा
वैदेशिक रोजगार विभागले गौशालाको पिंगालास्थानमा रहेको हिमालयन भ्याली नेपाल म्यानपावरमा छापा मारेकाे छ । मलेसियाको 'लिनाको म्यानुफेक्चरिङ' कम्पनीमा फ्याक्ट्री वर्कर पदमा जान लागेका एक युवासँग ७० हजार...
टेकु अस्पतालकाे आइसोलेसन वार्डबाट भागेका विरामी बिराटनगरमा
काठमाडौं । कोरोना आशंकामा टेकु अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका एक जना भागेका छन । बिरामीको मोबाइल ट्र‍्याकिङ गर्दा विराटनगरमा फेला परेको टेकु अस्पतालका निर्देशक डा.सागर राजभण्डारीले बताए । कोरियाबाट नेपाल...
जनताको अपेक्षा : ‘अर्गानिक ओली’ !
करिब १२ वर्ष अघि मृगौला प्रत्यारोपण गरेका केपी शर्मा ओली जीवनमा दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गर्न बाध्य भए । सफल मृगौला प्रत्यारोपण पछि नेकपा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओली टिचिङ अस्पतालमा स्वास्थ्य ...
नमस्कार, म मास्क हुँ..
नमस्कार, म मास्क हुँ । केही हप्तादेखि म बजारमा भेटिन छाडेको छु, तपाइँ बजारमा मलाई खोज्दा खोज्दा थाक्नु भएको होला । म दायाँबायाँ दुनियाँभर खोजिदै छु किनभने नोवेल कोरोना भाइरसबाट बचाउन मैले ठुलो भूमिक...
संसदीय समितिमा रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापति नआएकोमा आपत्ती
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिकाे बैठकमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा नगएपछि स्थगित भएको छ। नेपाली सेना भित्र भइरहेको आर्थिक भ्रष्...
कोरोना भाइरसबारे प्रसारित नक्कली समाचार रोक्न प्रयास गरिँदै
एजेन्सी । नोवेल कोरोना भाइरसको प्रकोपले विश्व आतंकित बनिरहेको छ । यस भाइरसले ७० वटा देशमा लगभग ९५,४८८ जनालाई संक्रमण गरिसकेको छ भने ३,२८६ जनाको मृत्यु भएको छ । यसैगरि हालसम्म ५३,६८९ जनाको उपचार भइसके...
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख, चार बजे पत्रकार सम्मेलन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गइरहेको छ । बुधवार दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ओलीको स्वदेशमा मिर्गौला प्रत्य...
विकास प्रक्रियामा अन्तर्निहित विविध पक्षका जानकार नेतृत्व भएमा विकासमा अलमल हुँदैन। उसलाई कसैले बहकाउन पनि सक्दैन। विषय विज्ञहरूको सहयोगमा नेतृत्वले विकासका प्राथमिकता सजिलै निर्धारण गर्न सक्छ। ती प्र...
महानगरीय ट्राफिक प्रहरीका तीनवटा कार्यालय थप
काठमाडौँ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाबाट दिने सेवालाई थप प्रविधिमैत्री बनाई उपत्यकाको थप ३ वटा कार्यालयहरूमा सेवा विस्तार गरेको छ । ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापतको कसूरमा कारवाहीको लागि खिचिएका क...
काठमाडौंमा होली खेल्न रोक
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण काठमाडौंमा होली खेल्न रोक लगाइएको छ । बुधबार बसेको जिल्ला सुरक्षा समन्वय समितिको बैठकले होली खेल्न नपाइने निर्णय गरेको हो । भिडभाड र जमघट हुने ठाउँमा कोरोना भा...
अज्ञात समूहद्वारा जेसिभी, स्काभेटर र स्कारपियो गाडीमा आगजनी
कपिलवस्तु । कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाको लोहोरौलामा अज्ञात समूहले दुई वटा जेसिभी,स्काभेटर र स्कारपियो गाडीमा आगजनी गरेका छन् । हुलाकी मार्ग निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको शर्मा एण्ड शर्मा कम्पनीक...
टाटा पिकअपको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु , एक घाइते
महोत्तरी । बिपी राजमार्गअन्तर्गत महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवास नगरपालिका–३ स्थित कालापानीमा गए राति टाटा पिकअपले ठक्कर दिँदा एकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका–७...